नियमित यौनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति झन तागतदार ? विज्ञ भन्छन् ‘हो’ - Gaule Media ::
Home/समाचार/नियमित यौनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति झन तागतदार ? विज्ञ भन्छन् ‘हो’
नियमित यौनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति झन तागतदार ? विज्ञ भन्छन् ‘हो’
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०३:२३
एजेन्सी । धेरैलाई भ्रम छ कि नियमित यौनसम्पर्क गर्ने व्यक्ति शारीरिक रुपमा दुर्वल अर्थात कमजोर हुन्छ । खेलाडी तथा बडीविल्डरहरुले सेक्स नगरेरै शरीर गठिलो बनाएका हुन् । तर त्यस्तो होइन ।
विज्ञहरु भन्छन्, बरु नियमित सेक्स गर्ने व्यक्ति हेल्दी र तागतदार हुन्छ । किनभने मांसपेसी बन्नु र यौनइच्छा बढ्नु दुबै पुरुषको सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनबाट निर्धारण हुने हो । शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन जति बढी हुन्छ यौन चाहना पनि उति बढी हुन्छ । र जति यौनचाहना बढ्छ तपाईँको शरीरको मांसपेशी पनि उती राम्रो बन्छ ।
भ्रष्टचारीविरुद्ध स्टिङ अप्रेसन गर्न पत्रकारलाइ गृहमन्त्रीको आग्रह
एमसीसीको म्याद थप्न सरकारले पठायो अमेरिकालाई पत्र
१८ असार २०७७, बिहीबार १६:१५
नेपाल बैंकमा १९२ पदमा आवेदन माग
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:०६
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनासँग लड्न ८ बुँदे प्राथमिकता
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:४१